Manome voninahitra an'i Stan Lee | ny artista manerantany Famoronana an-tserasera
Omaly dia andro nampalahelo tokoa nihaona ny vaovao fa nodimandry i Stan Lee. Ny angano tantara an-tsary dia mamela antsika hanana lova lehibe sy lehibe miaraka amin'ireo maherifo marobe toa ny Fantastic 4, Spiderman, Hulk ary maro hafa.
Tarehin-tsoratra maromaro izay nahatratra ny efijery lehibe tato ho ato miaraka amina biraon'ny boaty goavambe. Izy ireo izao mpanakanto isan-karazany nanao fanomezam-boninahitra ho an'i Stan Lee mba hahatsiarovany ilay Stan Lee tsara sy ilay Marvel mahatalanjona.
Vao omaly tamin'ny faha 95 taonany i Stan Lee no nandao antsika. Mpanonta, mpanoratra ary mpiara-mamorona ny sasany amin'ireo endri-tsoratra boky tantara an-tsary malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra. Ny X-Men, Iron Man na Spiderman dia sasany amin'ireo maherifo niampita tamin'ny kolontsaina pop mandrakizay.
Misaotra anao toetra sy hafanam-po Tamin'ny alalàn'ny tantara an-tsary dia nanjary iray tamin'ireo olo-malaza ankafizin'ny orinasa indrindra i Lee. Hitanay tamina sary mihetsika marobe tao amin'ny sarimihetsika Marvel izy rehefa nandalo tao amin'ny The Simpsons na andiany Big Bang Theory niaraka tamin'i Sheldon Cooper lehibe.
Ayer torana ny fon'ny mpankafy sy mpanao sariitatra an'arivony tamin'ny vaovao mampalahelo momba ny fahafatesan'i Stan Lee. Ary maro ireo mpanao sariitatra nanao fanajana, toa nitranga tamin'ilay David Bowie marobe.
Ireo tenifototra ve #StanLee, #StanLeeRIP ary #StanLeeForever ahafahanao manaraka ny teny sy ny fihetseham-po, ary koa ny sary, olona marobe manerana ny planeta.
Zanaka mpilalao sarimihetsika, mpanoratra ary tonian-dahatsoratra ireo izay nandefa ny hafatra fampiononany an'i Stan Lee. Sary maromaro izay manome voninahitra ny lova lehibe navelany ho antsika ary haharitra mandritra ny fotoana maharitra.
Araka ny nolazainy imbetsaka: Excelsior!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Manome voninahitra an'i Stan Lee izay nandao antsika omaly ny mpanakanto
Loko 5 hahafantarana ny kalitaon'ny sakafo amin'ny vokatra
Color Leap, na mandehandeha amin'ny tantara miaraka amin'ireo paleta miloko isan-karazany